Incazelo yesayensi yokuphulukisa ngokuyisimangaliso namandla omthandazo - AFRIKHEPRI FOUNDATION
umshado we-18 september, 2019
Izindaba ezinhle: Ukufakelwa kwe-Neural manje kungenzeka
Buka i-Colors Of Destiny (i-2012)
Izinwele ze-Nappy: Impindiselo yabesifazane abamnyama
Ukuphumelela kwe-turmeric ngokumelene nokuphazamiseka kokugaya ukudla, kuvimbela umdlavuza futhi kushukumise isimiso somzimba sokuzivikela
Wangari Maathai - Comic Strip (PDF)
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngo-Agasti 4, 2019
Inhloso iyisisekelo kunoma yimuphi umsebenzi wokuphulukisa. Umthandazo yiyona inkulumo evelele kakhulu. Inhloso izoba namandla okudlulisela ulwazi oluqondile ensimini yamandla. Isibonelo, uDkt. Laskow uye wabonisa ukuthi kungenzeka ukuvimbela ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza we-cultured ngendlela ye-18% ngokusebenzisa nje inhloso. Wandise lo mphumela ngesilinganiso se-40% ngokuzihlanganisa ngenhloso yesibili nomuntu wokuqala Okuhloswe ukuthi kuhloswe ukulinganisela izinga lokukhula kweseli ezingeni elivamile.
Umphulukisi angaphinda ahlangane nenhloso ngokudluliselwa kwamandla ukwandisa amandla ayo okuphulukisa. Kuboniswe ukuthi ukwelashwa ngokweqile okuhlotshaniswa nalokho okuvame ukubizwa ngokuthi ukubeka izandla kuye kwaphumela ekunciphiseni imiphumela yemithi elwa namagciwane kuma-bacteria. Ngakho-ke kusobala ukuthi inhloso yokuphulukisa ingathonya impilo. Ngakho-ke, umlusi unayo yonke inzuzo ekuzihlanganiseni nge ukwelashwa kwamandla.
Kodwa umuntu angachaza kanjani ukuthi injongo ingaba nomthelela omuhle ekuphileni?
Ukucwaninga usebenzisa idivaysi yokurekhoda amagagasi obuchopho kumagnethezi kanye neziguli zabo kuqinisekisa ukuthi kukhona uxhumano langempela phakathi komuthi kanye nesiguli. Kuye kwaphawula ukuthi amagagasi ochopho womnakekeli nomnakekeli bavame ukuvumelanisa njengoba kunakekelwa. Lokhu kuxhumene kuyoba, ngandlela-thile, ibhuloho evumela ukuthi lo mhlengikazi azenzele isiguli sakhe. Kungenzeka ukukholelwa ukuthi lolu xhumano oludumile luzovumela umhlengikazi ukuthi angene ensimini yamandla womlingani wakhe. Ngakho-ke wayeyoba nendlela yokudlulisela izinhloso ezizokwenza ithonya lakhe.
Kusukela ekuqaleni kwesikhathi, umphilisi unikezwe ikhono lokusebenzisa amandla othando. Lokhu kuxhumano ukuthi umphulukisi angadala ngokungangabazeki ukubonakaliswa kwamandla othando wesihawu esise-chakra yenhliziyo. Leli khono lomphilisa lizokwenzeka lapho umlindi echitha imingcele yakhe yomzimba ukuze ahambe ensimini yamandla omlingani wakhe. Ngakho-ke angakwazi ukwenza amandla omlingani wakhe ukuze athole insimu yakhe yamandla ngenhloso enhle.
Ngokusebenzisa i-decoding enembile, umphululi akakwazi ukuhlangana kuphela namandla omlingani wakhe, kepha angaqonda futhi ukungalingani futhi abone inhloso ezokwazi ukuhlangabezana nezidingo zabo ngokuphelele. Umnakekeli onembile uzokwazi ukwenza ukunakekelwa okuzohambisana nokudinga komlingani wakhe.
Ukuze uchaze ukuthi umphilisi enembile ubona nokuthi angathonya kanjani insimu yamandla womlingani, kuyadingeka ukuba ukhethe ukwelashwa kwe-quantum. Iphakamisa umqondo wokuthi ubuchopho busebenza njengehologram lapho sithola khona wonke amathuba okubonakala angabonakaliswa ezindaweni ezingokwengqondo, ngokomzwelo nangokwenyama. Lezi zindlela ezibonakalayo zidalwe ngokulandela indaba yethu yokuphila kanye nokuhlela esikukhiqizayo ngaphandle kolwazi lwethu. Ziyabonakala ngelashwa enembile ngesimo sezenzakalo ezedlule noma okungahle kwenzeke. Ngiyakholwa ukuthi kungenzeka nge-decoding enembile ukubona lezi zingokoqobo futhi ukuthi umuntu angakwazi kanjalo ukuqonda izinkolelo kanye nokuhlela okuzifakazela wena. Ngezinhloso kungenzeka ukuba uhlanganyele nalezi zindlela ukuze ubanike lokho okudingekayo ukuze bakhulule ekuhlelweni kwabo ngaleyo ndlela bavumele ibhalansi. Ngikholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi kuthinte izinto zangempela ukuze insimu yezamandla ivumelane kakhulu nesimo esijulile salo.
I-Quantum physics ijwayele ukufakazela ukuthi isikhala siyindaba ezijabulisayo, ezinamandla nezihlakaniphile. Yinkambu yamandla ukuthi uhlanganisa indawo yonke (i-matrix yaphezulu), esiphikisana nabo ngaso sonke isikhathi empilo yethu ngemicabango esinayo kanye nemizwa esizizwayo.
Ngokuqonda ulimi lomzwelo wesintu oluvumela ukuthi sikwazi ukuxhumana nale nsimu, sinamandla ukuphulukisa ububi ezithinta thina ngabanye kanye ndawonye.
Ukudonsa kwamanzi kudonsela emajukwini "azwayo" ngokudweba ubujamo bejometri. Ukuphakama kwama frequency, ama-geometric more shapes it ukuthatha kuhlelekile, kuhle futhi kuyinkimbinkimbi.
Akutholakali! imiphumela yalezi ziqaphelo ziningi: ukwazi lokho sakhiwa ngamanzi angu-70%Cabanga ngemiphumela yamagagasi ashukumisayo kumakhemikhali ethu amanzi, ngakho umzimba wethu wonke.
Manje, akuwona umculo kuphela isethi yemvamisa kodwa ipeniAmagama, abantu, imibala kanye namafomu nawo anemvamisa evame kakhulu noma engaphansi.
UDkt. Emoto (empeleni udokotela wezokwelapha okunye) usebenzisa inqubo yokufakazelae umqondo we "inkumbulo yamanzi". Iqukethe amanzi ashisa futhi ukudweba ama-crystals akhiwe emanqenqeni yamanzi aphethwe izidakamizwa ezihlukahlukene: umculo njengoMozart, uBach noma uBeethoven, imithandazo, imicabango yenzondo noma uthando ...
Manje ake sibone isicelo esingenakukwazi ukukhonjiswa kakhudlwana kuzo zonke lezi zifundo nge master of I-Chi-lel Qi Gong obesebenza nezibhedlela eChina iminyaka engaphezu kwengu-8, futhi waphatha ngempumelelo izifo ezahlukene ze-180.
Kuvidiyo enginikeza yona, uzofakaza ngesikhathi sangempela i ukunyamalala kwepoppula yomdlavuza yesisu ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwamandla ebalulekile e- Qi futhi Prana (isimiso esibalulekile sokuphefumula).
Kuyamangalisa: i-tumor iyanyamalala phambi kwamehlo akho kuyilapho abahlengikazi behlabelela igama elingukhiye eliye lakhethwa yisiguli kanye nabahlengikazi, igama elingukhiye elisho ukuthi selivele seliphulukisiwe futhi seluvele selifeziwe.
Incazelo: imvamisa ephezulu (i-Qi esekelwe emoyeni we-matrix) qeda indaba (i-tumor) okuwukuphela kokuqiniswa kwemvamisa ephansi.
Usuke usabela "Incazelo yezesayense yokuphilisa ama-mira ..." Imizuzwana embalwa edlule